प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौ छोड्दै !
बुधबार ९ असार, २०७८
मङ्गलबार ३० असोज, २०७५
काठमाडौ । अहिले सबै बडादशैँ मनाउनका लागि राजधानी काठमाडौ रहेको उपत्यका खाल्डो र देशभरीकै ठूला शहरबाट आफ्नो थाक थलो जाने क्रम जारी छ । काठमाडौ रहेको उपत्यकाबाटमात्र आजसम्म झण्डै २३ लाखले काठमाडौ छोडेका छन् । दशैको टिकाको दिनसम्म यो संख्या २४ लाख बाहिरीने अनुमान गरिएको छ । यही संख्यामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीपनि नबमीकै दिन गृहजिल्ला झापा जानुहुने भएको छ ।
पिता मोहनप्रसाद ओलीसँग दशैँ मान्न साथै झापाका मतदातासँग दशैँ, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वको शुभकामना बाँड्न झापा जानका लागि उहाँले काठमाडौ छोड्न लाग्नुभएको हो । उहाँ विजया दशमीका दिन बिहान गृहजिल्ला झापाबाट काठमाडौं फर्कने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस दिन बिहान पिता मोहनप्रसाद ओलीसँग टीका लगाएर काठमाडौं फर्किनुहुनेछ ।
उहाँ टीकाको अघिल्लो दिन नवमीमा झापा जानुहुनेछ । नवमीमा दिनभर उनी शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा व्यस्त हुने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यस दिन उहाँ बिर्तामोडमा दसैंतिहार तथा छठ पर्वका अवसरमा गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुनेछ । नवमीका दिन बिर्तामोडमा हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गर्ने गरेको प्रेस संयोजक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
घरबेटी सरस्वती प्रधान रिहा भएपछि रूपा सुनारको पहिलो प्रतिकृया
मनाङमा सडक खुलाउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट इन्धन पठाइने
सरकारले गर्यो आन्तरिक र बाह्य हवाई उडान खोल्ने निर्णय [सूचनासहित]
प्रतिपक्षीको विरोधपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित
महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध रु एक अर्बको भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा
मोडल निशाको अवस्थामा चमत्कारीक सुधार
देश गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघियता खारेजीको चरणमा जाँदै छ : महेश बस्नेत
दलितलाई कोठा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटी जेलबाट हास्दै छुटिन, अदालतमा मुद्धा नै लिइएन
रूपा सुनार डेरा प्रकरण : घरबेटी प्रधानविरूद्ध प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा फिर्ता
अभियान बन्दै जन्मदिनमा रक्तदान
फौजी किरा नियन्त्रण गर्न किसानलाई निःशुल्क विषादी
कोरियाका नेपालीद्वारा रामेछापलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
कलाकार आचार्यको उपचारमा लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको सहयोग
स्नातकोत्तर तहको परीक्षा साउन ४ गतेबाट सञ्चालन गरिने [रुटिनसहित]
असार दोस्रो साताबाट पुनः लकडाउन, प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बन्यो यस्तो मोडालिटी
त्रिविले सबै परीक्षा साउनभित्र सक्नेगरी कहिले तालिका (रुटीन) प्रकाशन गर्दैछ ?
यो हो स्मार्ट लकडाउन : सातामा दुई दिन बिदा, बजार खोलिने, सवारीसाधन सञ्चालन हुने
आज एकैदिन १४ जना मृत अवस्थामा फेला [ नामावलीसहित ]
त्रिविका आफ्ना सबै परीक्षा साउनभित्र सक्ने, यस्तो छ तयारी
त्रिविको परीक्षा फारम अनलाईन भर्ने आज नै अन्तिम मिति, परीक्षा केन्द्र यसरी रोज्नुपर्ने